तपाँईलाई थाहा छ? ‘कपिल शर्मा शो’का कलाकारले प्रत्येक एपिसोडमा कति लिन्छन् पा; रिश्रमिक ? – Ap Nepal
भारतीय सोनी टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने ‘कपिल शर्मा शो’ सर्वाधिक लोकप्रिय टेलिभिजन शो मानिन्छ । टीआरपीदेखि लिएर मानिसलाई मनपर्ने शोका रुपमा यसलाई लिइन्छ ।
यो शोको लोकप्रियताको श्रेय यसको टिमलाई जान्छ । तर विशेष श्रेय यसका सञ्चालक कपिल शर्मा आफैं हुन् । एबीपी लाइभमा प्रकाशित समाचारअनुसार यो शोका कलाकारहरुको पारिश्रमिक कुनै पनि बलिउड कलाकारको भन्दा कम छैन ।
हालसम्म कपिलले एक समयमा एक एपिसोडवापत ३० देखि ३५ लाख पारिश्रमिक लिन्थे । अहिले उनले आफ्नो पारिश्रमिक बढाएर प्रति एपिसोड ५० लाख पु¥याएका छन् ।
कपिल शोमा नवजोत सिंह सिद्धूको स्थानमा आउने कलाकार अर्चना पुरण सिंहको प्रति एपिसोड पारिश्रमिक १० लाख रुपैंयाँ छ । उनले यसअघि अन्य कैयौं कमेडी शोमा सहभागिता जनाइसकेकी छन् ।
अर्का कलाकार कृष्णा अभिषेक शोमा सपनाको भूमिका निभाइरहेका छन् । उनी एक एपिसोडका लागि १० देखि १२ लाखसम्म पारिश्रमिक लिन्छन् ।
किकू शारदा सुरुवाती समयदेखि नै यो शोको हिस्सा हुन् । समयसँगै उनले आफ्नो भूमिकामा निकै परिवर्तन गरेका छन् । उनी कपिलको एकदमै नजिकमध्येमा पर्छन् । उनी यो शोमा काम गर्दा प्रति एपिसोड ५ लाख रुपैंयाँ लिन्छन् ।
यो शोको अर्को महत्वपूर्ण सदस्य भारती सिंह पनि हुन् । टेलिभिजन शोका अलावा उनी कैयौं हिट अवार्ड शोको सञ्चालक पनि हुन् । त्यहीकारण उनी शोको प्रति एपिसोड १० देखि १२ लाख रुपैंयाँ पारिश्रमिक लिन्छिन् ।
चन्दन प्रभाकर कपिल शर्माका बाल्यकालदेखिकै साथी हुन् । दुवैले कैयौं कमेडी शोमा काम गरेका छन्। उनी कपिलको लाफ्टर च्यालेन्जमा पनि सहभागीका रुपमा थिए । चन्दनले प्रति एपिसोड ७ लाख रुपैंयाँ पारिश्रमिक बुझ्छन्। यो शोको प्रमुख अभिनेत्रीमा सुमोना चक्रवर्ती पनि पर्छिन् । सुमोना एक शोबाट ६ देखि ७ लाख रुपैंयाँ पाउछिन्।
Prevनेपाल पैसा पठाउदै हुनुन्छ ? आज यस्तो छ बिदेशी मुद्राको भाऊ
Nextलगातार बढेको सुनको मूल्य आज सोमबार घट्यो, तोलामा कतिमा कारोबार भयो त ?